घोराहीमा गठबन्धनका शर्मा र डाँगीको अग्रता कायमै - Everest Dainik - News from Nepal
घोराहीमा गठबन्धनका शर्मा र डाँगीको अग्रता कायमै
घोराही, १ जेठ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवारहरुको अग्रता कायम रहेको छ । आइतवार विहान ८ बजेसम्म घोराही उपमहानगरपालिकाका ६ वटा वडामा भैरहेको मत गणनाका आधारमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले फराकिलो अग्रता बनाउँदै लगेका छन ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हेमराज शर्मा ३ हजार १ सय ३७ मत प्राप्त गरेका लुम्विनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उम्मेदवार नरुलाल चौधरीले २ हजार ७ सय ६१ मत प्राप्त गरेर पछ्याइरहेका छन । हालसम्म एमालेका उम्मेदवार चौधरीभन्दा गठबन्धनका उम्मेदवार शर्मा ३ सय ७५ मत अन्तरले अघि रहेका छन ।
उपप्रमुखमा पनि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भुपबहादुर डाँगीले ३ हजार ४३० मत प्राप्त गर्दै अग्रतालाई फराकिलो बनाएका छन । उपप्रमुखमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी हुमा डिसीले २ हजार ६ सय ५९मत प्राप्त गरेकी छिन । उपप्रमुखमा गठबन्धनका डाँगी र एमालेकी डिसीबीच ७ सय ७१ मतको फरक छ ।
घोराहीमा अहिले वडा नं. १४, १५, १६, १७, १८ र १९ नम्वरमा मत गणना भैरहेको छ । जसमा वडा नं. १४, १६ र १८ मा एमाले अघि देखिएको छ भने १५, १८ र १९ मा गठबन्धनका उम्मेदवार अघि रहेका छन। मतगणना ढिलाई हुँदा अहिलेसम्म घोराहीमा कुनै पनि वडाको परिणाम आउन सकेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिकाका १९ वडाहरुमा ७६ हजार ५ सय २१ मत खसेको छ ।